Faylasha Fiyatnaamiiska - Dhulbaxa Quduuska ah ee Daraasadaha Vietnam
Nooca VIETNAMESE STUDIES waxaa ka mid ah maqaallo baranaya luqada Fiyatnaamiis.
Xarfaha Fiyatnaamiiska, oo sida caadiga ah loogu yaqaanno "qoraalka luqadda qaranka", ayaa ah nidaamka qoraalka casriga ah ee loogu talagalay luqadda Fiyatnaamiis.
Fiyatnaamiisku waa luuqad cod leh, Waxay ka dhigan tahay in codad kaladuwan oo ku dhaca erey kasta ay badalayaan macnaha eraygaas.
Hits: 535… ayaa sii waday qeybta 4: Wadahadal: Salaan David waa arday uu hada kaqeyb galay fasalka Vietnam,
Qoraallada ka dhacaya Fiyatnaamiis waxay ku taxan yihiin liiska sawirka Vietnamese oo leh dhawaaq dhawaaqeed xagga midigta ah.
Nidaamka xarfaha ee Fiyatnaamiiska waxaa ku jira 29 xaraf kaas oo ka kooban 12 shaqal iyo 17 shibanno.
Afka Fiyatnaamiis waa luqadda isgaarsiinta dadka Fiyatnaamiis iyo sidoo kale af-hooyo ee dadka Vietnam.
Naqshadeynta calaamadaha xarfaha, iyo isku-dhafantooda xargaha ah ee xarfaha, waxay muhiim u yihiin ka dhigitaanka Vietnamese qoraal cad oo la fahmi karo.
Qoraal ahaan, Fiyatnaamiis waxay si weyn ugu tiirsan tahay calaamadaha diacritical.
Sida lagu muujiyey alifbeetada, habka qoritaanka Fiyatnaamiis wuxuu adeegsanayaa toddobo xaraf oo wax laga badalay
Booqashada Maanta: 287
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,208
Guud ahaan Wadarta: 286,103